नेपाली भूमिमै प्रवेश गरेर भारतीय सु,रक्षाक,र्मीले भ,त्काए स,डक – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपाली भूमिमै प्रवेश गरेर भारतीय सु,रक्षाक,र्मीले भ,त्काए स,डक
वीरगन्ज — निर्माण सम्पन्न भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रयोगमा नआएको पुल सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको सडक भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाल प्रवेश गरेर भत्काएका छन् । पर्साको ठोरी गाउँपालिकाको वडा २ र ३ जोड्ने ठुटे खोलाको पुल सञ्चालनका लागि तीन दिन अगाडिमात्र कुलो पुरेर सडक बनाइएको थियो ।
भारतीयको अवरोधकै कारण पुल निर्माण सम्पन्न भएको २ वर्ष बित्दा पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । हुलाकी सडक र पुलबीचको कुलोमा सडक नबनाउन्जेल पुल प्रयोगमा ल्याउने अवस्था नरहेको वडा अध्यक्ष तामाङको दाबी छ । बिहीबार साँझ सडक भत्काउन आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएर आएको ठोरीवासीलाई बताएका थिए ।
शुक्रबार बिहान वडा एक, दुई र तीनका जनप्रतिनिधि र स्थानीयको भेलाले प्रजिअलाई स्थलगत भ्रमण गरेर समस्याको सामाधान निकालिदिन आग्रह गरेको छ । ‘सधैभरि त्यही कुलोको कुरा लिएर ठोरीबासीले अझै कति दिन पुल प्रयोग नगर्ने ? वर्षातको बेला वडा २ र ३ को सम्पर्क विच्छेद हुन्छ, एम्बुलेन्ससमेत आउन सक्दैन् । पोहोर एम्बुलेन्स आउन नसक्दा सुत्केरीको मृत्यु भयो,’ वडा अध्यक्ष तामाङले भने, ‘सहज वातावरण होस् भन्ने चाहेका छौ, सीडीओ साहेबले कुन हिसाबले भारतीयलाई सडक भत्काउन सहमित दिएका हन् ? स्थलगत आएर समस्या सुल्झाउनु पर्‍यो ।’
यस सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीलाई पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्कमा आएनन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले ठोरीको ठुटे खोला पुल सञ्चालनको विषयमा दुबै पक्षबीच छलफल भइरहेको बताए । ‘भारतीय महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारीसँग छलफल भइरहेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘आपसी सहमतिमा टुंगाइन्छ ।’
२०७५ जेठमा ठुटे खोलामा ६ करोड ९७ लाख २१ हजार रुपैयाँको लागतमा एक सय दुई मिटर लम्बाईको पुल निर्माण भएको थियो । हुलाकी राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माण सम्पन्न भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षको हस्तक्षेपका कारण प्रयोगमा ल्याएन सकिएको थिएन । गत जेठ १० मा जिल्ला समन्वय समिति पर्साका उपसभापति ठाकुर न्यौपाने, गाउँपालिका उपप्रमुख, तीन वडाका जनप्रतिनिधि लगायतको सर्वदलीय बैठकले ठुटे खोलाको पुल सञ्चालनमा ल्याउने सहमति गरेको थियो ।
ठुटे खोलामा पुल निर्माण गर्दा पनि भारतीय पक्षले अवरोध गरेको थियो । नेपाल–भारत सीमा नजिकै रहेको ठुटे खोलामा पुल निर्माणका लागि २०६७ सालमा सर्वेक्षण गरिँदा एसएसबीले भारतीय भूमि भन्दै अवरोध गरेको थियो । जसले गर्दा सात वर्षसम्म पुलको निर्माण सुरु नै हुन सकेको थिएन । २०७४ बैशाखमा दुवै देशका सीमा अधिकारीबीच भएको वार्तामा ठोरीको सीमा विवादमा सहमित भएपछि पहिले सर्वे गरिएकै स्थानमा पुल निर्माण सुरु भएको थियो ।
टिकटकले बिगार्‍यो नेपालको इन्टरनेट सेवा
नुवाकोटका सेना परिचालन
१५ दिनकाे शिशु च्यापेर रूदै निस्किए पहिलाे काेराेना मृतक परिवार , हजुरआमाले रुदै दियिन आमा गुमाएका बालकको दर्दानक अबस्था (भिडियोमा हेर्नुहोस )